ဒီနေ့ကျရောက်တဲ့ အောက်တိုဘာလ(၂)ရက်နေ့လေးကတော့ ကမ္ဘာကျော်သရုပ်ဆောင် ရှရွတ်ခမ်းရဲ့မွေးနေ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှရွတ်ခမ်းဟာ နိုဝင်ဘာလ(၂)ရက်၊၁၉၆၅ ခုနှစ် မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီနေ့မှာ အသက်(၅၄)နှစ်ပြည့်တာဖြစ်ပါတယ်။ ရှရွတ်ခမ်းဟာ ဘောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်လောကမှာ အအောင်မြင်ခဲ့ဆုံးလို့သတ်မှတ်ရမှာပါ။ သူဟာဘောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်း (၈၀)ကျော်ခန့်မှာ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ဖလင်ဖဲလ်(Flimfare Awards) ၁၄ ဆုရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ရှရွတ်ခမ်းဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊နယူးဒေလီမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူကြီးပြင်းခဲ့တဲ့အရပ်ဒေသကတော့ ရာဂျန်ဒရာ နာဂါမှာလို့ဆိုရမှာပါ။ သူဟာ ဒေလီမှာရှိတဲ့ စိန့်ကိုလန်ဘကျောင်းမှာတက်ခဲ့ပြီး ဟော်ကီနဲ့ဘောလုံးအားကစားမှာ ထူးချွန်ခဲတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ခမ်းဟာ အားကစားဘဝနဲ့အသက်မွေးဖို့စဉ်းစားခဲ့ဖူးပေမယ့် သူရခဲ့တဲ့လက်မောင်းဒဏ်ရာကြောင့် ဆက်မဆော့ဖြစ်တော့ပါဘူး။ အဲ့ဒီအစား သူဟာစတိတ်စင်ပေါ်တွေမှာ သရုပ်ဆောင်ရတာတွေကို ပိုနှစ်သက်သဘောကျလာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ခမ်းဟာ ဟန်စရာ့ခ်ျကောလိပ်ဝင်ခွင့်ရခဲ့ပြီး စီးပွားရေးဘွဲ့ရခဲ့ပေမယ့် သူ့ရဲ့အချိန်တော်တော်များများကို ဒေလီကဇာတ်ရုံအုပ်စုမှာ အချိန်ကုန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီကဇာတ်ရုံဒါရိုက်တာရဲ့သင်ကြားပေးမှုနဲ့ သရုပ်ဆောင်ပညာကိုလေ့လာခဲ့တယ်ဆိုရမှာပါ။ရှရွတ်ခမ်းဟာ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ မာစတာဘွဲ့အတွက်ကျောင်းဆက်တက်ခဲ့ပေမယ့် သရုပ်ဆောင်အလုပ်ကိုပဲရူးသွပ်ခဲ့တာကြောင့် ရပ်နားခဲ့ပြီး …
မပူမပင် မကြောင့်မကြ အေးချမ်းစွာနေနိုင်မယ် ဗုဒ္ဓယတြာ နံနက် အိပ်ယာထချိန်တွင် မိမိတို့အိမ်တွင် ရှိသောမြတ်စွာဘုရားကိုမျက်နှာသစ်တော်ရေ၊သောက်တော်ရေချမ်းကပ်ပါ …. ။ မျက်နှာသစ်တော်ရေနှင့် သောက်တော်ရေချမ်း ကပ်လှူသောအခါ ဘဒ္ဒကမ္ဘာတွင် ပွင့်တော်မူသော သဗ္ဗညုတမြတ်စွာဘုရားကို ဘုရားတပည့်တော်၊ တပည့်တော်မသည် မျက်နှာသစ်တော်ရေနှင့်သောက်တော်ရေချမ်းကို သဒ္ဒါကြည်ဖြူစွာ နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်း လှူဒါန်းပါသည် အရှင်မြတ်ဘုရား …. ။ ဤကဲ့သို့လှူဒါန်းရသော ကုသိုလ်ကံ စေတနာကြောင့် ဘုရားတပည့်တော်၊တပည့်တော်မ၏ စိတ်သည် တစ်နေ့တာလုံးဤရေကဲ့သို့အေးမြပါစေ။ပူပင်သောက ဟူသမျှသည် ပပျောက်၍ ဤရေကဲ့သို့ အေးချမ်းမှုရရှိပါစေ …. ။ဘုရားတပည့်တော်၊ ဘုရားတပည့်တော်မနှင့် ကြုံရဆုံရသမျှသော ခုနစ်ရက်သားသမီးအပေါင်း၏ ဘဝသည်လည်းဤရေကဲ့သို့အေးချမ်းကြပါစေ … ။ ဘုရားတပည့်တော်၊ တပည့်တော်မ၏ ယ္ခုပစ္စုပ္ပန်၊ အနာဂတ် ဘဝတစ်လျှောက်လုံး စိုးရိမ်ပူပင်ကြောင့်ကြမှုအစုစုတို့သည် ဤမျက်နှာသစ်တော်ရေ၊ …
ချစ်သူကောင်မလေးက သင့်ကို အချိန်မရွေး စွန့်ပစ်သွားစေနိုင်တဲ့ အမူအကျင့်များ…
ချစ်သူကောင်မလေးက သင့်ကို အချိန်မရွေး စွန့်ပစ်သွားစေနိုင်တဲ့ အမူအကျင့်များ… လူတစ်ယောက်မှာ မကောင်းတဲ့ အမူအကျင့်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်က မသိဘဲ၊ ဒါမှမဟုတ် သိသိကြီးနဲ့ တွယ်ကပ်နေတတ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ချစ်သူစုံတွဲတွေမှာလည်း ဒီလိုပဲ အကောင်းဆုံးလို့ထင်ပြီး ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးမှ လိုအပ်ချက်တွေ၊ သဘောထား မတိုက်ဆိုင်မှုတွေ အများကြီး ရှိနေတတ်တာကို တွေ့ရတတ်ပါတယ် …။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သင့်အနေနဲ့ ဒီအမူအကျင့်တွေရှိနေတယ်ဆိုရင် အမြန်ဖျောက်ဖျက်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် သင့်အတွက်လည်း ရေရှည်မကောင်းသလို၊ သင့်ချစ်သူ ကောင်မလေးက အချိန်မရွေး စွန့်ပစ်သွားတာကို ခံရနိုင်ပါတယ် …။ (၁) ဂရုမစိုက် အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေခြင်း” ချစ်သူဆိုတာ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ဂရုစိုက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ဦးက ဂရုစိုက်ပြီး အခြားတစ်ဦးက အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ဖြစ်နေရင် ရော့တိရော့ရဲ …
“ကနေဒါနိုင်ငံမှာ လာရောက်ဖျော်ဖြေဖို့ ကမ်းလှမ်းခံခဲ့ရတဲ့ Myanmar Idol Season (4)က ချင်းလူမျိုးအဆိုတော်(၃)ဦး”
Myanmar Idol သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကြီးကတော့ ကျင်းပပြုလုပ်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။Myanmar Idol သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကြီးကတော့ လက်ရှိကျင်းပနေတာဆိုရင် (၄)ကြိမ်မြောက်ကျင်းပပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီး ဒီအစီအစဉ်ကြီးကို ကျင်းပပြုလုပ်တိုင်းမှာ အားပေးသူပရိသတ်တွေအများကြီးနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေရရှိတဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။လတ်တလောမှာကျင်းပနေတဲ့ အစီအစဉ်မှာတော့ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ Finalist ပြိုင်ပွဲဝင်တွေဟာလည်း ဒိုင်တွေကိုယ်တိုင်ကရွေးချယ်ရခက်လောက်အောင်ကို တော်ကြတဲ့ သူတွေပါ။ ဒီနှစ်ပြိုင်ပွဲကြီးမှာတော့ ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ Finalist (11)ယောက်ထဲမှာ ချင်းလူမျိုးပြိုင်ပွဲဝင် (၃)ဦးတိတိပါဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ (၃)ယောက်ကတော့ အက်စတာဒေါ့ချင်းဆုန်၊ဘင်ဂျမင်ဆုမ်း၊ယောကီးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့(၃)ယောက်စလုံးကတော့ လာမယ့် (၂၀၂၀)ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၂)ရက်နေ့မှာကျရောက်တဲ့ ချင်းအမျိုးသားနေ့အတွက် ကနေဒါနိုင်ငံမှာ သီဆိုဖျော်ဖြေဖို့ကို ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ အခုလိုသီဆိုဖို့ကမ်းလှမ်းခံခဲ့ရတဲ့ ချင်းလူငယ်အဆိုတော်(၃)ဦး ဆုန်ဆုန်၊ဘင်ဘင်နဲ့ ယောကီးတို့ဟာဆိုရင်လည်း အဆိုပိုင်းမှာပါရမီပါတဲ့ သူတွေလို့ဆိုရလောက်အောင်ကို ကိုယ်ပိုင်ဟန်လေးတွေနဲ့ သီချင်းတွေကို သီဆိုဖျော်ဖြေပြီး ပရိသတ်အားပေးမှုကို အပြည့်အဝရရှိထားကြတာလည်း အမှန်ပါ။ …
ပုထုဇဉ်တို့နယ်ပယ်၌ ငွေသည် အဓိကဖြစ်သည် ငွေမရှိလျှင် မည်သို့ မျှ ရပ်တည်၍မရ ။ ငွေကြောင့် ပင်ပန်း ဆင်းရဲဒုက္ခ ရောက်ကြရသည် ။ လုပ်လေမြုပ်လေ ဖောင်စီးရင်း ရေငတ်နေ သူများ ရှိကြသည် ။ ( ပေးစရာ အကြွေးကလည်းရှိ ရစရာ အကြွေးကလည်း ပြန်မရ။ မိုးထဲရေထဲ မှာလိုဖြစ်နေသည့် ဘဝမျိုးဆိုလျှင်စာရေးသူ ယခု ရေးသားတင်ပြမည့် ငွေလည်း မကုန် လူလည်း မပန်းသည့် ကိုးန၀င်းယတြာကို ချေကြည့်ပါလားလို့ တိုက်တွန်းလိုပါသည် ။ ) ဤပညာရပ်ကို နားနောင်ဆရာတော် ဦးကလျာဏထံက ရရှိပါသည်။ ၁ ။ တနင်္လာနေ့ နံနက် ( ၉ ) …
ထီကိုကံစပ်ပြီးထိုးတာမျိူးတွေ လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ ကိုယ်တွေ့မို့လို့ပြောပြတာပါ …. ထီကို ကံစပ်အောင် ဆိုပြီး မိတ်ဆွေနဲ့ သော်လည်းကောင်း ၊ သူငယ်ချင်းနဲ့ သော်လည်းကောင်း ရှယ်ယာ လုပ်ပြီး ထိုးနေကြတဲ့ လူတွေကို သတိပေးချင် ပါတယ် … ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ထီကို ကိုယ်တိုင်ပဲ ထိုးကြပါ ။ ဘယ်သူ့ကိုမှ မယုံကြည် ပါနဲ့ …။ ကျနော် ကိုယ်တွေ့ပါ ။ အခု ထွက်သွားတဲ့ ၉ ကြိမ်မြောက် ထီမှာ ကျနော် သွားမထိုးအားလို့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်နဲ့ စပ်တူ ထိုးမယ်ဆိုပြီး သူနဲ့ ထိုးခိုင်း လိုက်တယ် …။ နာမည်တော့ မပြောတော့ ပါဘူး …
အမှန်တစ်ကယ် အသုံးဝင်တဲ့ သဘာဝ ဆေးနည်းများ
အမှန်တစ်ကယ် အသုံးဝင်တဲ့ သဘာဝ ဆေးနည်းများ သင့်ခန္ဓာကိုယ်က တစ်နေ့တစ်မျိုး မရိုးရအောင် ဂဂျီဂဂျောင် ကျတတ်ပါတယ် ။ ဥပမာ မနက် အစည်းအဝေး သွားစရာ ရှိပါတယ်ဆိုမှ လည်ချောင်း နာနေတာမျိုး ၊ ပင်လယ်စာတွေ စားထားပြီး ဗိုက်မအီမသာ ဖြစ်နေတာမျိုး ၊ Gym ဆော့တာများသွားလို့ တစ်ကိုယ်လုံး ကိုက်ခဲနေတာမျိုး စသဖြင့်ပေါ့ ။ အဲဒီပြဿနာတွေက ရောဂါတွေ မဟုတ်တာကြောင့် ဆရာဝန်ဆီ အပြေးအလွှား သွားပြစရာ မလိုဘဲ ကိုယ့်အိမ်မှာတင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ကုသနိုင်ပါတယ် ။ ဆေးနည်းတွေက သင့်အိမ်ထဲမှာတင် ရှိပါတယ် ။ ၁ ။ မူးဝေ အော့အန်လျှင် ပထမဦးစွာ လတ်ဆတ်တဲ့ …
ပလတ်စတစ်အမှိုက်ကို recycle လုပ်ပြီး အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ ဖိလစ်ပိုင်အင်ဂျင်နီယာ
ပလတ်စတစ်အမှိုက်ကို recycle လုပ်ပြီး အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ ဖိလစ်ပိုင်အင်ဂျင်နီယာ မော်တော်ယာဉ်တွေ၊ စက်ရုံတွေကထွက်တဲ့ ညစ်ညမ်းဓာတ်ငွေတွေကြောင့်တင်မက လူသားတွေရဲ့ များပြားလှတဲ့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေ ကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကြီးဟာ တစ်ဆထက် တစ်ဆ ပိုမိုညစ်ညမ်းလာပါတယ်။ အဲဒီလို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းအောင် ပြုလုပ်သူတွေက လူသားတွေ ဖြစ်သလို ညစ်ညမ်းလာတဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် ဆိုးကျိုးတွေခံစားမှာကလည်း လူသားတွေပါပဲ။ အဲဒါကြောင့် မိမိတို့အသိတရားနဲ့ ဆင်ခြင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတွေလည်း အများအပြား ပေါ်ပေါက်လာပြီး တတ်နိုင် သလောက် အသိပညာပေးမှုတွေနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးအတွက် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေ လုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်။ စွန့်ပစ်အမှိုက်တွေထဲမှာ အဆိုးရွားဆုံးကတော့ နှစ်ပေါင်း များစွာတိုင်အောင် မပျက်စီးဘဲ ကျန်နေနိုင်တဲ့ ပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်အမှိုက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ …
This Month : 33534
This Year : 204760
Total Users : 499893
Total views : 2069042